Command Prompt ကနေ Virus သတ်ကြရအောင်
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Virus » Command Prompt ကနေ Virus သတ်ကြရအောင်
1 Command Prompt ကနေ Virus သတ်ကြရအောင် on 25th March 2010, 11:00 am
ဒီနည်းနဲ့ Memory stick , Mp3, Mp4 စတဲ့ဟာတွေကို virus သတ်လို့ရပါတယ်...
စာဖတ်သူကတော့ Virus ကိုသိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်...
ဥပမာ - Autorun.inf , NoeNoeJetma.vbs , Folder.exe စသဖြင့်ပေါ့...Extension က .exe မှ Virus မဟုတ်ပါဘူး...
တခြား Virus အမျိုးအစားတွေလဲရှိပါတယ်...တချို့ Virus တွေဆိုရင် Command Prompt ကနေ
သတ်လို့တောင်မရဘူး..ဥပမာ - MS-DOS.exe လိုကောင်မျိုးပေါ့......
Virus တွေဘယ်လိုရေးလဲသိချင်ရင်ကျွန်တော့် Blog နံပါတ်(27)မှာသွားကြည့်လိုက်ကြပါ..။
1) Start > Run >cmd လို့်ရိုက်ပါ။
2) ပြီးရင် Driver လမ်းကြောင်းပေးပါ။
ဥပမာ- "F:\_" , "E:\_" စသဖြင့်ပေါ့...
3) လမ်းကြောင်းပေးပြီးရင် attrib ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါ။
4) အဲဒီမှာ SHR F:\_autorun.inf
5) အပေါ်မှာပြထားသလိုမျိုး ပေါ်နေလို့ရှိရင် Memoary Stick ထဲမှာ Virus ပါနေပါပြီ။
အဲဒီ Virus ကိုအရင်ဆုံးဖေါ်ရပါတယ်။
6) ပြီးရင် del. autorun.inf ဆိုပြီးထပ်ရိုက်ပါ။
7) အဲဒီမှာ" *, Are you sure <Y/N>? "ဆိုပြီးမေးလာပါလိမ့်မယ်။
" Y " လို့ရိုက်လိုက်ပါ..။
attrib ဆိုပြီးပြန်ရိုက်ကြည့်လိုက်ပါဦး Autorun.inf မရှိတော့ပါဘူး..။
တကယ်လို့ Virus ရှိနေသေးတယ်..ဖျက်လို့လည်းမရပါဘူးဆိုရင်တော့စာဖတ်သူရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာ
2 Re: Command Prompt ကနေ Virus သတ်ကြရအောင် on 25th March 2010, 3:38 pm
ကျွန်တော် attrib လုပ်ရင် space ပုတ်ထားတဲ့ဟာဆိုမရဘူးဗျ။
ဥပမာဗျာ C:\_Document and Setting ဆိုရင် Parameter format not correct - တဲ့
File name (or) Folder name တဆက်တည်းဖြစ်တဲ့ဟာတွေဆိုရတယ်။
3 Re: Command Prompt ကနေ Virus သတ်ကြရအောင် on 26th March 2010, 9:45 am
attrib autorun.inf -s -h -r လို့ ရိုက်ရမှာလေဗျာ
ဒါမှ command တွေ ကို Windows ကသိမှာဗျ။
attrib ပြီးရင် Virus Name ကို လိုက်ဖို့ တော့လို တယ်။
ပြီးမှ -s -h -r ကို ရိုက်ပြီးသတ်။
ပြီးတော့ ဒီ Post ကလူတော်တော်များများ ရေးထားကြပါတယ်။
တခြား Virus သတ်တဲ့Post များရှိရင်တော့ မစပါအုံး။
4 Re: Command Prompt ကနေ Virus သတ်ကြရအောင် on 26th March 2010, 11:17 am
attrib -s -h -r autorun.inf လို့ဘဲရိုက်ရိုက်
attrib autorun.inf -s -h -r လို့ဘဲရိုက်ရိုက်
ကိုဇော်မင်းသိတဲ့ ဗိုင်းရပ်သတ်နည်းရှိရင်လည်း ပြန်မစပေးပါဦးဗျာ...
5 Re: Command Prompt ကနေ Virus သတ်ကြရအောင် on 26th March 2010, 12:39 pm
Sorry ဗျာ... ကျွန်တော်မေးချင်တဲ့ဆိုလိုရင်းကို မရေးတတ်လို့ မပေါ်လွင်ဘူးဖြစ်နေတာ
Folder တစ်ခုလုံးကို attrib + လုပ်ထားတာကို ပြန်ဖြေ(attrib -)လုပ်ချင်တာ
အဲမှာစတာပဲ။ Folder name က တစ်ဆက်တည်းဆိုရင်ရတယ်။
Folder name က space ပါနေရင်မရတော့ဘူး။
6 Re: Command Prompt ကနေ Virus သတ်ကြရအောင် on 26th March 2010, 2:54 pm
Write it within double quotes . Something like "Document and Settings" with quotes.
e.g: C:\_> attrib -s -h -a "Document and Settings"
7 Re: Command Prompt ကနေ Virus သတ်ကြရအောင် on 26th March 2010, 3:55 pm
ကျေးဇူးပဲအကိုရေ။ အဲတုန်းက ကြံရာမရတဲ့အဆုံး folder ကို နာမည်ပြောင်းပြီးလုပ်လိုက်ရတယ်။
အရေးထဲ folder name တွေက chinese လိုဆိုတော့ copy ကူးထားရသေးတယ်။ အခု attrib အကြောင်းတွေ့လို
8 Re: Command Prompt ကနေ Virus သတ်ကြရအောင် on 27th March 2010, 10:12 am
Virus သတ်နည်းကတော့ Manual ပဲရှင်းတယ်ဗျ။ဖြစ်မှဘဲရှင်းတာ။
Virus တွေကိုသိချင်ရင်တော့ ဒီမှာကြည်ကြည့်ပေါ့
Last edited by mars <<လင့်အတွက် code ခံပြီးပြင်ပေးထားသည်။>>
9 Re: Command Prompt ကနေ Virus သတ်ကြရအောင် on 27th March 2010, 10:29 am
နောက်မှ Attrib အကြောင်းကိုတင်ပေးပါ့မယ်
10 Re: Command Prompt ကနေ Virus သတ်ကြရအောင် on 27th March 2010, 10:32 am
ကျွန်တော့ကို cmd (command prompt) နဲ့ ပက်သက်ပြီးသင်ပေးပါလား။ဘယ် code ကဘယ်လို အသုံးဝင်တယ်ဆိုပြီး((( Gmail:dk92ster@gmail.com )))ကျွန်တော့် mail ပါ
11 Re: Command Prompt ကနေ Virus သတ်ကြရအောင် on 27th March 2010, 10:46 am
ကျွန်တော်ရှာထားတဲ့ An A-Z Index of the Windows XP command line ဆိုတာလေးရှိ်တယ်ဗျ
12 Re: Command Prompt ကနေ Virus သတ်ကြရအောင် on 27th March 2010, 10:56 am
DOSKEY Edit command line,recall commands, and create macros
13 Re: Command Prompt ကနေ Virus သတ်ကြရအောင် on 27th March 2010, 2:52 pm
zawmin wrote: ကျွန်တော့ကို cmd (command prompt) နဲ့ ပက်သက်ပြီးသင်ပေးပါလား။ဘယ် code ကဘယ်လို အသုံးဝင်တယ်ဆိုပြီး((( Gmail:dk92ster@gmail.com )))ကျွန်တော့် mail ပါ
အကယ်၍ စိတ်ဝင်စားပြီး လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင် အောက်က ကျနော်ပေးထားတဲ့ဆိုက်လေးမှာသွားပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်ဗျာ... ကျနော်ကတော့ အလွယ် အကိုလိုချင်တဲ့ command အထိကိုခေါ်ပေးပြီးမှ လင့်ပေးထားတယ်.. home page မှာဆိုရင်လည်း တခြားလေ့လာစရာလေးတွေရှိပါတယ်.. နည်းနည်းလောက်သွားကြည့်လိုက်ပါလား...
14 Re: Command Prompt ကနေ Virus သတ်ကြရအောင် on 28th March 2010, 9:22 am
15 Re: Command Prompt ကနေ Virus သတ်ကြရအောင် on 28th March 2010, 9:37 am
က command တွေကို ကျွန်တော်ပြန်ပြီး Ms word နဲ့ရေးထားတာရှိတယ်ဗျ..
Last edited by solakoko on 28th March 2010, 10:41 am; edited 1 time in total (Reason for editing : Using code)
16 Re: Command Prompt ကနေ Virus သတ်ကြရအောင် on 28th March 2010, 9:44 am
ဒီနေ့တော့ ATTRIB ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
"The moral sense of conscience is by far the most important.. it is the most noble of all the attributes of man" - Charles Darwin
17 Re: Command Prompt ကနေ Virus သတ်ကြရအောင် on 28th March 2010, 10:20 am
ကျေးဇူးပြုပြီး မြန်မာလို ရေးပေးလို့ ရမလား
ဟီးဟီး English မကျွမ်းဘူးဗျ
18 Re: Command Prompt ကနေ Virus သတ်ကြရအောင် on 28th March 2010, 10:23 am
ွှ့Thank You Very Much......အဲ့ ဒီLINK တစ်ခုလုံးကိုဘယ်လို Download ဆွဲရမလဲပြောပါအုံး
19 Re: Command Prompt ကနေ Virus သတ်ကြရအောင် on 28th March 2010, 10:53 am
ကနေ download ဆွဲထားတဲ့ ဟာပါ...
20 Re: Command Prompt ကနေ Virus သတ်ကြရအောင် on 31st March 2010, 10:40 am
တင်ပေးမယ်ဆို လို့ စောင့်နေတာကြာပြီ :cry
21 Re: Command Prompt ကနေ Virus သတ်ကြရအောင် on 10th July 2010, 11:59 am
ကျွန်တော် Xcopy မသုံးတတ်လို.
22 Re: Command Prompt ကနေ Virus သတ်ကြရအောင် on 10th July 2010, 1:56 pm
xcopy /c /s *.* D:\_
*.* က အားလုံးကို ကူးမယ်လို့ ပြောတာပါ။
D:\_ ဆိုတာကတော့ ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ Directory လေးပါ...။
23 Re: Command Prompt ကနေ Virus သတ်ကြရအောင် on 10th July 2010, 2:37 pm
xcopy source [destination] [parameter]
ကိုယ်ကူးချင်တဲ့ဖိုင်ကို Source နေရာမှာထားပြီးသကာလ
ပြောင်းချင်တဲ့နေရာကို Destination နေရာမှာထားရပါတယ်။
အာပမု။ ။ /R ဆိုရင် ကူးထားပြီးသားဖိုင်တွေကို Overwrite လုပ်
ပိုပိုပြီးများသိချင်တယ်ဆိုရင် Xcoyp /? ဆိုပြီး command ထဲမှာ
ရှာကြည့်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ [You must be registered and logged in to see this image.]
24 Re: Command Prompt ကနေ Virus သတ်ကြရအောင်